Atemmufo 16 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 Da bi Samson kɔɔ Gasa+ kohuu ɔbea aguaman bi wɔ hɔ, na ɔkɔɔ ne nkyɛn.+ 2 Afei wɔbɔɔ Gasafo amanneɛ sɛ: “Samson aba ha.” Enti wotwaa ne ho hyiae+ tɛw no anadwo mũ nyinaa wɔ kurow no pon ano.+ Na wɔyɛɛ komm anadwo no kae sɛ: “Sɛ anim tetew ara pɛ a, yebekum no.”+ 3 Nanso Samson daa hɔ kosii ɔdasum, na ɔsɔre kotuu kurow no pon+ ne n’adum abien no ne n’adaban nyinaa, na ɔde too ne mmati+ foro kɔɔ bepɔw a ɛwɔ Hebron+ anim no so. 4 Ɛno akyi no, n’ani begyee ɔbea bi a wɔfrɛ no Delila+ ho wɔ Sorek bon mu. 5 Afei Filistifo ahene+ no baa ɔbea no nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Daadaa+ no na hu dekode a n’ahoɔden kɛse no fi mu, ne nea yɛde benya no ne nea yɛde bɛkyekyere no adi no so. Na yɛn mu biara bɛma wo nnwetɛbona apem ne ɔha.”+ 6 Bere bi akyi no, Delila bisaa Samson sɛ: “Mesrɛ wo, kyerɛ me dekode a w’ahoɔden kɛse no fi mu, na dɛn na sɛ obi de kyekyere wo a, obetumi adi wo so?”+ 7 Ɛnna Samson ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wɔde nhama+ momono ason a ɛnwoe kyekyere me a, megurow na mayɛ sɛ onipa biara.” 8 Enti Filistifo ahene+ no de nhama momono a ɛnwoe ason brɛɛ no, na ɔde kyekyeree no. 9 Saa bere yi na mmarima bi tetɛw ɔbea no dan mu,+ na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Samson, Filistifo+ no reba wo so!” Na ɔtew nhama no mu abien te sɛ asaawa a ogya aka ma emu atew abien.+ Enti wɔanhu faako a n’ahoɔden no fi.+ 10 Ɛnna Delila+ ka kyerɛɛ Samson sɛ: “Hwɛ, woredi me ho fɛw, na wompɛ sɛ woka nokware kyerɛ me.+ Mesrɛ wo, kyerɛ me dekode a wobetumi de akyekyere wo.” 11 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wɔde ntampehama foforo a wɔmfa nyɛɛ hwee da kyekyere me a, megurow na mayɛ sɛ onipa biara.” 12 Enti Delila faa ntampehama de kyekyeree no, na ɔkae sɛ: “Samson, Filistifo no reba wo so!” Saa bere yi nyinaa na mmarima no tetɛw dan no mu.+ Na Samson tew mu abien te sɛ asaawa bi.+ 13 Afei Delila ka kyerɛɛ Samson sɛ: “Woda so ara redi me ho fɛw, na wompɛ sɛ woka nokware kyerɛ me.+ Kyerɛ me ade a wobetumi de akyekyere wo.”+ Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Fa ahama+ nwene me ti so mmɛsa ason no bom.” 14 Enti ɔde akoroteaa bɔɔ mu na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Samson, Filistifo no reba wo so!”+ Na onyanee, na oyii akoroteaa ne ahama no. 15 Afei ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wosɔre a wuse, ‘Medɔ wo,’+ nanso wo koma nni me ho. Mprɛnsa ni a woadi me ho fɛw, na wonkyerɛɛ me baabi a w’ahoɔden yi nyinaa fi.”+ 16 Na ɔde asɛm no guan ne ho+ daa ma ne kra ho yeraw no, na onyaa owu mpo a anka ɔpɛ.+ 17 Enti afei ɔkaa ne komam+ nsɛm nyinaa kyerɛɛ no sɛ: “Oyiwan+ nkaa me ti da, efisɛ mifi me maame yafunu mu+ ara pɛ na mebɛyɛɛ Nasirini maa Onyankopɔn. Sɛ miyi me ti nhwi a, m’ahoɔden nyinaa bɛkɔ, na megurow na mayɛ sɛ nnipa a wɔaka nyinaa.”+ 18 Bere a Delila hui sɛ waka ne komam nsɛm nyinaa akyerɛ no no, ntɛm ara na ɔsoma kɔfrɛɛ Filistifo ahene+ no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommra, na waka ne komam nsɛm nyinaa akyerɛ me.”+ Enti Filistifo ahene no baa ne nkyɛn de sika no brɛɛ no.+ 19 Afei ɔdedaa no wɔ ne srɛ so. Na ɔfrɛɛ ɔbarima bi ma obetwitwaa mmɛsa ason no fii ne ti so, na ɔbea no fii ase hyɛɛ no so. Na n’ahoɔden fii ase kɔe. 20 Afei ɔkae sɛ: “Samson, Filistifo no reba wo so!” Enti onyanee na ɔkae sɛ: “Mefi adi sɛ kan no+ akɔwosow me ho.” Nanso na onnim sɛ Yehowa atwe ne ho afi ne ho.+ 21 Enti Filistifo no kyeree no tutuu n’aniwa,+ na wɔde no kɔɔ Gasa+ de kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn+ abien guu no. Na wɔma ɔyam+ awi wɔ afiase.+ 22 Nanso bere a woyii ne ti nhwi no ankyɛ biara na efii ase fuw pii.+ 23 Na Filistifo ahene no hyiae, na wɔbɔɔ afɔre kɛse maa wɔn nyame Dagon,+ na wogyee wɔn ani kae sɛ: “Yɛn nyame de yɛn tamfo Samson ahyɛ yɛn nsa!”+ 24 Bere a ɔman no huu no no wɔhyɛɛ wɔn nyame no anuonyam,+ na wɔkae sɛ: “Yɛn nyame de yɛn tamfo no ahyɛ yɛn nsa,+ nea ɔsɛe yɛn asase+ na okunkum yɛn nkurɔfo pii no.”+ 25 Bere a wɔn ani agye+ no, wɔkae sɛ: “Monkɔfa Samson mmra na ommegyigye yɛn ani.”+ Na wɔkɔfaa Samson fii afiase bae sɛ ommegoru nkyerɛ wɔn;+ na wɔde no gyinaa adum no ntam. 26 Ɛnna Samson ka kyerɛɛ abarimaa a okura ne nsam no sɛ: “Ma minso adum a ɔdan yi gyina so no mu na memfa me ho ntweri.” 27 (Saa bere yi na mmarima ne mmea ahyɛ fie hɔ mã a Filistifo ahene nyinaa wɔ hɔ bi;+ ná mmarima ne mmea bɛyɛ mpem abiɛsa wɔ ɔdan no atifi rehwɛ Samson bere a ɔregyigye wɔn ani no.)+ 28 Afei Samson+ srɛɛ Yehowa+ sɛ: “Nokware Nyankopɔn Yehowa, Awurade Tumfoɔ, mesrɛ wo kae me+ na hyɛ me den+ saa bere yi nkutoo, na mintua Filistifo ka, m’aniwa abien yi mu biako ho.”+ 29 Afei Samson susoo adum abien a ɛwɔ mfinimfini a ɔdan no gyina so no mu, ne nifa kura biako mu na ne benkum kura biako nso mu. 30 Na Samson kae sɛ: “Me kra ne Filistifo yi nwu.”+ Afei ɔde n’ahoɔden nyinaa kuntun ne mu, na ɔdan no dwiriw guu ahene no ne nnipa a wɔwɔ hɔ nyinaa so.+ Enti nnipa a okum wɔn ne wuda dɔɔso sen wɔn a okum wɔn ne nkwa nna mu.+ 31 Akyiri yi ne nuanom ne ne papa fiefo bɛfaa no kosiee no wɔ ne papa Manoa+ amusiei wɔ Sora+ ne Estaol+ ntam. Obuu Israel atɛn mfe aduonu.+